I-Sunflower B&B Comfort - I-Airbnb
I-Sunflower B&B Comfort
Ikamelo e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Sunflower B&B
Ihhotela lethu le-B&B libekwe enkabeni ye-Kyiv, uhambo lwemizuzu nje ukusuka e-Maidan Nezalezhnosti Square. Amakamelo ahlukene angu-5, i-WiFi yamahhala, ukuhlanzwa kwansuku zonke, abasebenzi abanobungane nabawusizo endaweni yokwamukela izivakashi, isimo sasekhaya.
Ukudla kwasekuseni kunga-odwa nge-euro engu-5 eyengeziwe / umuntu futhi kuhanjiswe ekamelweni.
I-Khreschatyk Street emaphakathi nezitolo nezindawo zokucima ukoma iwuhambo lwemizuzu emi-2 ukusuka ehhotela, kanti iSt. I-Michael's Golden-Domed Monastery iwuhambo lwemizuzu emi-5.
Amakamelo akhanyayo, athokomele futhi abanzi ane-air conditioning ahlinzeka ngangaphakathi ngombala ofudumele kanye ne-decor yesitayela sakudala. Igumbi lifika liphelele line-TV nendlu yokugezela yangasese enesomisi sezinwele nezinto zamahhala zamahhala.
Izinhlobonhlobo zamakhefi nezindawo zokudlela zingatholwa phakathi nohambo lwemizuzu emi-2 ukusuka ehhotela.
I-Maidan Nezalezhnosti Metro Station iwuhambo lwemizuzu emi-2 kuphela ukusuka e-Sunflower B&B Hotel. I-Kyiv Central Train Station iqhele ngamakhilomitha angu-4, kanti isikhumulo sezindiza i-Boryspil International singamakhilomitha angama-35 ukusuka ehhotela.
Le ndawo ikhethwa kahle kubahambi abathanda ama-cathedrals, izikhumbuzo namasiko.
Lena ingxenye eyintandokazi yezihambeli zethu yase-Kiev, ngokusho kokubuyekezwa okuzimele.
Sikhuluma ulimi lwakho!!
Ibungazwe ngu-Sunflower B&B